Samsung ၏ Android Go ကို Bluetooth SIG | Androidsis
Samsung ၏ပထမ ဦး ဆုံး Android Go နှင့်ပတ်သက်ပြီးကောလဟာလများထွက်ပေါ်နေသည်။ ၎င်း operating system နှင့်အတူစမတ်ဖုန်းများစွာကိုဈေးကွက်ထဲထည့်ပြီးသည့်နောက်တွင်၊ တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီကမူယင်းကိုမပြသသေးသော်လည်းစောစောစီးစီးသိသိသာသာတိုးလာသည်.
ဤအခါသမယတွင်ဤကြိုးမဲ့နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအဓိကထားသည့်အကျိုးအမြတ်မယူသောအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည့် Bluetooth အထူးအကျိုးစီးပွားအဖွဲ့ကအသိအမှတ်ပြုထားပါသည် Samsung ၏ပထမ ဦး ဆုံး Android Go မိုဘိုင်း Android Oreo ကိုအခြေခံသည်. အသေးစိတ်ကိုသင့်အားပေးသည်။
Bluetooth SIG မှပေးသောအချက်အလက်ရှိသော်လည်း ဖုန်းကိုစာရင်းထဲတွင်၎င်း၏အမည်ရင်းဖြင့်ဖော်ထုတ်မထားပါ, သို့သော်သူတို့၏စံပြနံပါတ်များသည်ယခင် Android Go device အတွက်ပေါက်ကြားခဲ့သည့်အရေအတွက်နှင့်တူကြောင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ဤရွေ့ကား: SM-J260F, SM-J260M, SM-J260Y, SM-J260F_DS, SM-J260G_DS, SM-J260M_DS နှင့် SM-J260Y_DS ။
စံပြနံပါတ်များသည်မတူညီသောနိုင်ငံများတွင်မတူညီသောမျိုးကွဲများကိုရည်ညွှန်းသည်တောင်အမေရိက၊ အာရှနှင့်ဥရောပတို့မှပါ ၀ င်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ် "DS" ကုဒ်ပါသောမူကွဲများမှာ Dual SIM ကဒ်အထိုင်များကိုထောက်ပံ့ပေးသူများဖြစ်သည်။ Bluetooth SIG အရလည်း Samsung ၏ Android Go စက်သည် Bluetooth 4.2 ဆက်သွယ်မှုကိုထောက်ပံ့သည်သို့သော်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပင်၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များ၊
ယခင်ကောလာဟလများနှင့်ယိုစိမ့်မှုကဖော်ပြသည် ဒီအနိမ့်ဆုံးဖုန်းမှာ ၅ လက်မထောင့်ဖြတ် AMOLED နည်းပညာနှင့် HD resolution ပါရှိပါတယ်။စျေးကွက်ရှိဖုန်းများအားလုံးတွင်အတိတ်ကာလကထိုကဲ့သို့သောတည်ရှိမှုရှိခဲ့သည့် 16:9ရှုထောင့်အချိုးအစားနှင့်အတူ။ ၎င်း၏ Gut များတွင် quad-core Samsung Exynos 7570 chipset အများဆုံးနာရီနှုန်း 1.4Hz အမြန်နှုန်းရှိသည်။ ဤအရည်အသွေးအားလုံးသည်စတိုးဆိုင်များသို့အလွယ်တကူရောက်နိုင်သောကုန်ကျစရိတ်ကိုရောက်ရှိနိုင်သောဤဝင်ပေါက် terminal ၏ဘတ်ဂျက်နိမ့်နှင့်ကိုက်ညီသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Samsung ၏ Android Go ကို Bluetooth SIG မှအသိအမှတ်ပြုထားသည်
Galaxy Tab S4 ၏ firmware သည် ၄ ​​င်းတွင် iris scanner နှင့် facial recognition ရှိသည်ဟုအတည်ပြုသည်